၅၃ နှစ်မြောက် KIO တော်လှန်ရေးနေ့ မြစ်ကြီး နားမှာ ကျင်းပ
မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက် မနောကွင်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ KIA ရဲ့ ၅၃နှစ်ပြည့် လက်နက်ကိုင်တော် လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ဆုတောင်းပွဲကို တွေ့ရစဉ်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ ၅၃ နှစ်မြောက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွေ ကို ကေအိုင်အိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမှာ ဒီနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အခမ်းအနားကို တစ်နိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မ တီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုထွယ်အောင်က ပြောပါ တယ်။
“ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့မှာ အားလုံးစုပေါင်း ပြီးတော့ အခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော် ဒီစစ်ပွဲတွေ ငြိမ်းသွားဖို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော် အဓိကဆုတောင်းတာပေါ့၊ ငြိမ်းချမ်းပြီး တရားမျှတတဲ့ နိုင်ငံတော်ပေါ့နော် တရားမျှတတဲ့အစိုးရ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပေါ့နော် ဒီမှာရှိတဲ့ကချင်လူငယ်တွေအားလုံးပေါ့နော် ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ ဆုတောင်းတာပေါ့နော်”
ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကေအိုင်အိုဟာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး အစိုးရနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်ရင်းသား လူနည်းစုတွေရဲ့ ဒုက္ခကို စာနာနားလည် ရှေ့တန်းကထားပြီး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက အမြှော်အမြင်ကြီးကြီး သင်္စာရှိရှိနဲ့ ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ပါမှ တိုင်းရင်းသားတွေ ုကုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲက ကင်းဝေးမှာပါ။
Feb 05, 2014 08:32 PM
နိုင်ငံဆိုတာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ. တစ်ခုပဲရှိသင့်တယ်...အဲဒီတပ်ဖွဲ့ဟာလည်း ပြည့်သူ့ကာကွယ်ရေး.. နိုင်ငံကာကွယ်ရေး. ပြည်သူချစ်တဲ တပ်ဖွဲပဲဖြစ်သင့်တယ်....အဲဒီတပ်ဖွဲ့ကလွှဲရင် ကျန်တပ်ဖွဲ့အားလုံးမရှိသင့်ဘူး..ရှိရင်အဲဒါသောင်းကျန်းသူပဲ.. ဒါဆိုအမြစ်ပြတ် ..နလံမထူနိုင်အောင်ခြေမှုန်းရမယ်..ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူး... ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကျူးကျော်မှသာ... တိုက်ရမယ့် စစ်ပွဲဖြစ်သင့်တယ်...
Feb 05, 2014 07:07 PM